पहुँचवालाका घर–घरै पीसीआर, सर्वसाधारण भने अस्पतालमै पुग्दा समेत भएन परीक्षण | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पहुँचवालाका घर–घरै पीसीआर, सर्वसाधारण भने अस्पतालमै पुग्दा समेत भएन परीक्षण
पहुँचवालाका घर–घरै पीसीआर, सर्वसाधारण भने अस्पतालमै पुग्दा समेत भएन परीक्षण
साउन ३२ गते, २०७७ - ०९:०१
काठमाडौं । आफूहरू कोभिड–१९ संक्रमितको सम्पर्कमा रहेको भनेर बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि पीसीआर परीक्षण नभएपछि बुधबार एउटा समूह टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुग्यो । समूहमा रहेकाहरूले सक्दो छिटो परीक्षण गरिदिन माग राखे ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – अस्पताल प्रशासनले भने उनीहरूलाई इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) पठाइ दियो । उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि ईडीसीडीका ल्याब टेक्निसियन डबल बीसीले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्थानीय तहले गर्छ, उतै जानुस् ।’
राजधानीमा संक्रमित बढिरहँदा उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरू परीक्षणका लागि अस्पताल जाने क्रम पनि बढेको छ । टेकु अस्पतालमा पीसीआर गराउन दिनमा पाँच सयभन्दा बढी आउँछन् । सामाजिक दूरी समेत कायम नगरी कोचिएर उनीहरू घन्टौं लाइनमा पालो कुर्छन् । यसबाट संक्रमण झनै फैलने जोखिम पनि हुन्छ । सर्वसाधारणले यस्तो सास्ती खेपिरहनु परेका बेला लक्षण नदेखिए पनि उच्च ओहोदा वा पहुँचवालाको भने घर र कार्यालयमै पुगेर तत्काल परीक्षण गरिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले उपत्यकाका अन्य सरकारी, निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर गराउन अनुमति दिएको छ । अनुमति पाएका सबैले ५ हजार ५ सय लिन्छन् । शल्यक्रिया गराउनुपर्ने होस् वा लक्षण भएका बिरामी जसले पनि पीसीआर गराउन पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘टिचिङ अस्पतालमा एक जना बहिनीको आन्द्रा सुकेका कारण अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो । अप्रेसन गर्नुअघि पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने रे । पीसीआरको ५ हजार ५ सय तिर्नैपर्ने भयो,’ कृष्ण रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्रालयमा सोध्दा तिर्नु पर्दैन भने तर टिचिङले मानेन । सरकारी अस्पतालमै पनि अपरेसन गर्नेलाई निःशुल्क भनेको पीसीआरको शुल्क लिएरै छाडे ।’
पैसा तिर्न नसक्नेहरू निःशुल्क पीसीआर गराउन टेकुमा गएर घन्टौं लाइन बस्छन् । कतिपय चाहिँ ऋण गरेरै भए पनि अन्य सरकारी र निजी अस्पतालमा पुग्छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटिएका ईडीसीडीका एक कर्मचारीका अनुसार पीसीआर परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्नेहरूमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने, बेरोजगार भएर भौंतारिँदै काठमाडौं आइपुगेकाहरू धेरै देखिन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेको ईडीसीडीले दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारी कर्मचारीको कार्यालयमै पुगेर र नेताहरूका घरघरमै छिरेर स्वाब संकलन गरिरहेको छ । साउनमा मात्रै ८ हजार ९ सय २१ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र अन्य कार्यालयका कर्मचारी, पदाधिकारीको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन १४ मा परिमार्जन गरेको ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन’ मा लक्षण नदेखिएका कर्मचारी वा पहुँचमा भएका नेताहरूका घरघरमै गएर पीसीआर गर्ने उल्लेख छैन । निर्देशिकामा कोरोनाको लक्षण देखिएका (खोकी लागेका, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका, झाडापखाला लागेका, सुँघ्ने तथा स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा ह्रास भएका) ले नमुना परीक्षण गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै संक्रमितसँग सम्पर्कमा पुगेका सबै व्यक्ति, श्वासप्रश्वास तथा भाइरल संक्रमण भएका सबै व्यक्ति, स्थल तथा हवाई दुवै मार्गबाट आएकालाई सात दिनभित्र परीक्षण गरिने भनिएको छ । निर्देशिकाले अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी तथा अन्य समूहको पनि परीक्षण गर्ने भनेको छ ।
१४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका हरेक व्यक्ति, कोरोना प्रभावित ठाउँबाट आएका हरेक व्यक्ति, आईसीयूमा उपचार गरिरहेका, ६० वर्ष पुगेका सबै, अस्पतालमा शल्यक्रियाको प्रक्रियामा रहेका र अस्पतालमा बसेर डिस्चार्ज हुन लागेका सबैको परीक्षण गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । ईडीसीडीले भने दुई सातायता परीक्षणलाई निर्देशिका विपरीत सिंहदरबारभित्र मन्त्रालय, संवैधानिक निकायमा केन्द्रित गरेको छ ।
मन्त्री निवास, दलका कार्यालय र नेताहरूका घरमा समेत पीसीआर गराउन कर्मचारी खटाइएको छ । ईडीसीडीका स्रोतअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा समेत पीसीआर गर्न कर्मचारी खटिएका थिए । त्यहाँ कसैलाई लक्षण देखिएर स्वाब संकलन गरिएको होइन ।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा साउन २३ मा ६८ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो । त्यही दिन साँझ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला निवासबाट २४ जनाको स्वाब लिइएको थियो । साउन २९ मा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको निवासबाट २४ जनाको स्वाब संकलन गरिएको ईडीसीडीले जनाएको छ ।
ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले निर्देशिकाविपरीत लक्षण नभएका व्यक्तिको घर र कार्यालयमा पीसीआर गराउन पुग्नु गलत भएको बताए । ‘जसको पीसीआर गर्न कोरोनाको लक्षण छैन न त बाहिर कतैबाट आएको हो ।
उनीहरूका घरघर र कार्यालयमा गएर स्वाब निकाल्दा गलत सन्देश जान्छ । राज्यको लगानी पनि गलत ठाउँमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘लक्षण भएका, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, प्रसूति गर्नुपर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गराउनुपर्ने व्यक्तिको मात्रै पीसीआर गराउँदा राज्यलाई भार कम पर्छ ।’
जथाभावी पीसीआर गर्दा नेगेटिभ आएको व्यक्ति जताततै जाँदा थप जोखिम हुने उनले बताए । ईडीसीडीका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित बढेपछि सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागी हुने कार्यालयका कर्मचारीको पीसीआर गरिएको बताए ।
‘अब लक्षण भएका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएका व्यक्ति (संक्रमितको सिधा सम्पर्कका) को मात्रै पीसीआर गर्छौं,’ उनले भने, ‘हरेक कार्यालयमा पीसीआर गर्दा लगानी बढी हुने र प्रतिफल कम हुने देखियो ।’
साउन ३२ गते, २०७७ - ०९:०१ मा प्रकाशित